दुनियाँको मनमा बसेकी अभिनेत्रीको मृत शरीर दुई टुक्रा अवस्थामा बोरामा फेला - Babal Khabar
काठमाडौं । आइतबार बेपत्ता भएकी बङ्गलादेशी अभिनेत्री राइमा इस्लाम शिमुको मृ’ शरीर बोरामा फेला परेको छ ।
शिमुको दुई टुक्रा अवस्थामा मृ’त श’रीर बोरामा फालिएको थियो । प्रहरीका अनुसार सोमबार बिहान ढाकाको केरानीगञ्जको आलियापुर क्षेत्रको हजरतपुर पुल नजिकै सडक किनारमा मृ’त शरीर फेला परेको हो ।
३५ वर्षीया अभिनेत्रीको घाँ’टीमा पनि दा’ग थियो । प्रहरीले यस घट’नामा संलग्न भएको भन्दै अभिनेत्रीका श्रीमान् र साथीसहित ६ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
मंगलबार दिउँसो ढाका प्रहरीले पत्रकार सम्मेलनमा अभिनेत्रीका श्रीमान सखावत, उनका साथी र चालकलाई तीन दिनको म्याद थप गरेको बताएको छ । त्यसपछि उनले घरायसी विवादका कारण श्रीमती राइमाको ज्या’न लिइएको स्वीकार गरेका छन् ।
सुटिङका ​​लागि गएकी थिइन्, त्यसपछि फर्किइनन्
राइमा बङ्गलादेशको राजधानी ढाकाको ग्रीन रोड क्षेत्रमा श्रीमान् र दुई सन्तानसँग बस्दै आएकी थिइन् ।शिमु आइतबार बिहान मावामा सुटिङ गर्न घरबाट निस्किएका थिइन् । त्यसपछि उनीसँग पटक–पटक फोनमा सम्पर्क गरिए पनि पत्ता लाग्न सकेन । बच्चाहरूले सोचे कि आमा सुटिङमा व्यस्त हुन सक्छ ।
तर, साँझसम्म पनि घर नफर्केपछि परिवारले कालाबागन प्रहरी चौकीमा उजु’री दिएको हो ।राइमाको मृ’त शरीर पछि हजरतपुर पुल नजिकैको सडक किनारबाट दुई टु’क्रामा फेला परेको थियो । प्रहरीले मृ’त शरीर परीक्षणका लागि मिडफोर्ड अस्पता’ल पठाएको छ ।
दाजुले श्रीमान वि’रुद्ध उजु’री दिए
मृ’त शरीर फेला परेपछि शिमुका भाइ सहिदुल इस्लाम खोकनले श्रीमान् सखावत अमीन नोबेलविरुद्ध मु’द्दा दायर गरेका हुन् ।
ढाका जिल्लाका प्रहरी उपरीक्षक मारुफ हुसेन सरदारले श्रीमान् र उनका साथी फरहादसहित ६ जनालाई शिमुको ज्या’न लिइएकोमा शं’कास्पद रूपमा हि’रासतमा लिइएको जानकारी दिनुभयो । एउटा कार पनि जफत गरिएको छ, जसको पछाडिको सिट रगतले लतपतिएको थियो ।
मु’द्दा पनि थियो
अभिनेता जायद खान पनि खोकनसँगै प्रहरी चौकी पुगेका थिए । बङ्गलादेश फिल्म आर्टिस्ट एसोसिएसनमा सदस्यतालाई लिएर जायेद खानसँग पनि शिमुको विवाद रहेको उद्योगका आन्तरिक स्रोतले बताएको छ ।
तर, खानले आरो’पलाई खारेज गर्दै विगत दुई वर्षमा शिमुसँग फोनमा कुरा नगरेको बताए । उनले यो सबै आफुविरुद्धको षड्यन्त्र भएको बताए ।
शिमुले काजी हयातको फिल्म प्रेजेन्टबाट आफ्नो अभिनय यात्रा सुरु गरेकी थिइन् । त्यसपछि देलवार जहाँ झन्टु, चसी नजरुल इस्लाम, शरीफ उद्दिन खान दिपु र अन्य धेरै निर्देशकहरूले फिल्ममा अभिनय गरेकी थिइन् ।सन् १९९६ देखि २००४ सम्म शिमुले करिब २५ फिल्ममा अभिनय गरिन् । उनले ५० भन्दा बढी नाटकमा अभिनय गरेकी थिइन् ।
उनी लामो समयदेखि एक निजी टिभी च्यानलको मार्केटिङ विभागमा काम गर्थिन् । उनको आफ्नै निर्माण कम्पनि पनि थियो । उनी छोटो समयमा नै दुनियाँको मनमा बसेकी थिइन् । यो खबर जनवोलीमा छ।
Prevनिकै दुखद खबरः नालीमा परेर गैंडाको मृत्‍यु !
Nextएसईई र कक्षा १२ को परीक्षाको मिति सार्वजनिक ! कहिले हुन्छ त जान्नुस